कब्जियत हुन्छ? यसरी हटाउनुस् सजिलै - Reports Nepal
१. शौच गर्दा लाग्ने समय हेरेर– बिहान दिसा बस्दा करिब २ देखि ३ मिनेटमा गरी सक्नुपर्छ। अन्यथा अपच भनेर बुझ्नु पर्छ।
२. दिसाको प्रकारले– हामीले खाएको खाना सही तरिकाले पाचन भएमा दिसा सेल जस्तो बाँधिएको नरम आउँछ। यदि दिसा कडा वा पातलो भएमा कब्जियत भयो भनेर बुझ्नु पर्छ।
यसरी कब्जियत भए–नभएको, खाएको मिले–नमिलेको सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। यसका लागि कुनै अस्पताल या ल्याबमा गइरहनु पर्दैन। हाम्रो शरीर नै सबैभन्दा ठूलो ल्याब हो। खाएको मिले–नमिलेको देखिने पहिलो ठाउँ पनि शरीर नै हो। शरीरको यो सामान्य बोलीलाई मात्र ध्यान दिएमा हामी स्वस्थ रहन सक्छौं।
तसर्थ बिहान उठ्नेबित्तिकै करिब २–३ मिनेटभित्र गन्धरहित, च्यापच्याप नलाग्ने, सेल जस्तो बाँधिएको मल निष्कासन भएमा कब्जियत छैन र खाएको राम्रोसँग पचेको छ भनेर बुझ्नु पर्छ।